सलाम कुलमान सर ! यसरी सम्भव बनाए कुलमान घिसिङले अहिलेको तिहार झलमल हुन (सक्दो शेर गरौँ ) – Complete Nepali News Portal
सलाम कुलमान सर ! यसरी सम्भव बनाए कुलमान घिसिङले अहिलेको तिहार झलमल हुन (सक्दो शेर गरौँ )
Suresh Sunar November 12, 2018
पहिला पहिलाको तिहारहरुमा नेपाल विधुत प्राधिकरणले नोटिस जारी गरेरै तिहारमा धेरै झिलिमीली बत्ति नवाल्न भन्ने गथ्र्यो । तर अहिले नेपाल विधुत प्राधिकरणमा तिहारको वोला पारिएको झिलीमिलीले धेरैको आँखा तान्यो । त्यहाँ मात्रै होईन यो तिहारमा तिलीमिलीले देश नै उज्यालो बन्यो । यो सबै सम्भव बनाउने व्यक्ति हुन कुलमान घिसिङ । विगत २ वर्ष देखि देश लोड्सेडिङ मुक्त भएको छ । कुलमान प्राधिकरणमा आए देखि नेपालमा लोड्सेडिङ कम हुँदै आएको थियो । र यो पटकको तिहारमा त देश नै झलमल भयो । कसरी सम्भव बनाए त कुलमान घिसिङले यो । तलको भिडियो हुर्नुस । साथै कुलमान घिसिङको सम्मानमा भिडियो सबैले शेर गरौँ । (भिडियो)[youtube https://www.youtube.com/watch?v=UQ1Xm7jEm0Y]
33 सेकेन्ड अगाडि